China Electric Hydraulic Booster for Heavy Duty Vehicles စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Hipsen
Electric Hydraulic Booster (EHB) သည် ဘရိတ်စနစ်အတွက် မြင့်မားသော ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ဆာဗာတစ်ခုဖြစ်ပြီး accumulator မှ ဖိအားကို ထိန်းချုပ်ရန် အတွင်းပိုင်းရှိ စလစ်အဆို့ရှင်ကို တွန်းထုတ်နိုင်ပြီး၊ ဖုန်စုပ်စက်ကဲ့သို့ တူညီသောလက္ခဏာများ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက် လက်သီးချက်
1. Actuation ၏ Boe: D38;
2. Bore of Brake master cylinder တို့မှ
26.99 မှ 33.33mm;
3. ပျက်ကွက်မှုအတွက် အရန်သိမ်းခြင်း- ယန္တရား ;
4. ပါဝါထောက်ပံ့မှု- DC12V/24V
Oသင့်ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးအဆင့်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အလွန်တည်ငြိမ်သော လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာမှ လူကြိုက်များပါသည်။ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် နာမည်ကြီးဖောက်သည်များဖြစ်သည့် Polaris၊ Ford OtoSan၊ Electra Meccanica Vehicle (Canada)၊ Cardone ... အစရှိသဖြင့် 100 ကျော်နှင့် တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားသည်။
2. ISO/TS16949 ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် OEM/ODM SOP။
ယခင်- Ford Ranger 1990-1994 အတွက် OEM F0TZ-2140-A MC39953 ပါရှိသော မာစတာဆလင်ဒါများ
နောက်တစ်ခု: Electric Brake Vaccum Pump Withe Hella# UP32 7P0614215A
BMW အတွက် OEM 34336786586 ပါသော ဘရိတ်ဆလင်ဒါများ...
S4500 ဖြင့် ဘရိတ်အချိုးအစား Valve သံမဏိလိုင်း
သံသတ္တုဖြင့် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ O...
Honda 1327 LPR အတွက် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ O...
ထိပ်တန်း OEM MC2912 ပါရှိသော Master Cylinder ဘရိတ်များ...
Diaphragm အမျိုးအစားဖြင့် လျှပ်စစ်ဘရိတ်ဖုန်စုပ်ပန့်...